Ngwaọrụ Mmezi Excel. Excel Iweghachite Software. Idozi faịlụ Excel.
Ngwa ngwa ngwa
Iweghachite Njikwa MS Office
Outlook Express mmezi
Outlook Express Gbochie
Outlook Express Mbanye Iweghachite
Iweghachite Paswọdu Outlook
Archive / ndabere Iweghachite
Iweghachite onyonyo / dọkụmentị
Iweghachite data / file undelete
Mmezi Officelọ Ọrụ
Ndabere / Misc Software
Download ngwa ngwa
30 ụbọchị ego azụ nkwa
Ndị ahịa anyị
Ndị na-ere ahịa
DataNumen Excel Repair bụ kasị mma Repairkpụrụ nrụzi na ngwaọrụ mgbake na ụwa. O nwere ike idozi faịlụ Excel xls na xlsx rụrụ arụ ma weghachite data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ faịlụ.
Free download100% ala
Zụta ugbu aNkwado afọ ojuju nke 100%
4.90 / 5 (site na 1,601 votes)
Tozọ isi nwetaghachi
Gịnị mere DataNumen Excel Repair?
# 1 Iweghachite
100% afọ ojuju
Naghachi karịa ndị asọmpi anyị
Iweghachite bụ most Nkọwa dị mkpa nke ngwaahịa mgbake Excel. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen Excel Repair nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ n'ahịa!
Nkezi nkwụghachi ụgwọ
Mụtakwuo banyere otu DataNumen Excel Repair na-ese anwụrụ mpi
Akaebe Ndị Ahịa Anyị
Daalụ maka ngwa ọrụ gị, ọ nyere m aka n'ụzọ zuru oke iji rụzie faịlụ m kachasị mma.
Ngwaahịa gị rụzuru nke ọma.
Eugenio G. Bahamondes
Onyeka Onwenu Senior Electrical Engineer
NorTecnica Injinia Ltd.
Ọ bụ ihe omume mara mma. Sorta 'a "no-brainer" nke masịrị m.
Abụ m nwa amaala data ma jiri Foxpro mee ihe karịa akwụkwọ mpịakọta Excel.
Ma ndụ anaghị aga etu ahụ mgbe gị na ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ.
Ọ bụrụ na mmemme gị arụghị ọrụ, mụ na enyi m gaara abanye na ntuziaka site na iji hex ma ọ bụ ASCII na-ekiri faịlụ ma jiri aka dezie ọnụọgụ abụọ iji mezie nrụrụ aka. Kedu ihe dọrọ adịrị.
Nke ahụ emeghị. Ya mere, m na-ekwu ọmarịcha ọrụ ma ị nweta votu m na PR n'ọdịnihu.
Daalụ ọzọ. Ego bara uru.
Ebe nchekwa data
DataNumen Excel Repair zọpụta ụbọchị ahụ ma weghachite data m chọrọ site na faịlụ m mebiri emebi. Ọ dị oke mfe iji, ọ rụrụ ọrụ nke ọma maka m
DataNumen Excel Repair zọpụta ụbọchị ahụ ma weghachite data m chọrọ site na faịlụ m mebiri emebi. Ọ dị mfe iji, ọ rụrụ ọrụ nke ọma maka mkpa m, m na-akwado ya!
PIN Technology, Inc.
Ọ rụrụ ọrụ mara mma! Usoro m niile na data m (ma eleghị anya nke ukwuu) na-edegharị data na-alọghachi ugbu a! DAALỤ!! N'oge okpomọkụ m nwere
Ọ rụrụ ọrụ mara mma! Usoro m niile na data m (ma eleghị anya nke ukwuu) na-edegharị data na-alọghachi ugbu a! DAALỤ!! N'oge okpomọkụ m nwere oge iji rụọ ọrụ na ihe, mana anyị starlaghachitere m n'ụlọ akwụkwọ n'oge na-adịghị anya, a na m ejidekwu aka na ọrụ anụ ahụ karịa ọrụ kọmputa, enweghịkwa m oge (ma ọ bụ obi) ịnọdụ ala ma banyeghachi usoro mkpụrụ ndụ iri asaa na itoolu, nkọwapụta na zoro aka! Anọ m na-arịa ọrịa na afọ m na atụmanya ahụ.
Atụrụ m anya na ị nwere izu ụka magburu onwe ya n'izu, na izu ụka izu ike ma na-atọ ụtọ!
Kristi Rankin Onye Ozizi
Brownwood, Texas, USA
Ngwaọrụ idozi Excel nwere ike wepu data ederede niile na faịlụ 2 mebiri emebi nke Excel na-emeghe ma na-echekwa mgbe m nwere nsogbu PC.
Ngwaọrụ idozi Excel nwere ike wepu data ederede niile na faịlụ 2 mebiri emebi nke Excel na-emeghe ma na-echekwa mgbe m nwere nsogbu PC. Otú ọ dị, ngwá ọrụ ahụ enweghị ike iweghachite ihe niile na usoro niile (obi ike, agba wdg) lost yana ihe dị ka ọkara nke usoro ahụ (ọkachasị ndị gbagwojuru anya nke jikọtara ibe ya elu). Ebe enwere nsogbu di iche, ngwa a gha ebipu mpempe akwukwo di ugbua na akwukwo ozo ka i wee mara ebe ichota ihe furu efu - ezigbo echiche. N'ozuzu ya, ihe dị egwu dịka data ahụ bụ akụkụ kachasị sie ike iji weghachi site na isi mmalite. Otu n'ime faịlụ ahụ jikọtara ya nke na enweghị ike depụtaghachi ya, mepee (ma ọ bụ wepụ ya ọbụlagodi) na mmemme MS ọ bụla! N'ozuzu, ngwá ọrụ ahụ zọpụtara m ihe dị ka ọrụ izu. O were ihe na-erughi otu ụbọchị iji weghachite faịlụ ndị nkịtị site na ịmegharị usoro site na ụdị faịlụ ka ochie ma hụ data ahụ. Rịba ama maka ndị ọrụ, ọ bụrụ na ọ dị ka ngwa ọrụ ahụ akwụsịla, nwee ndidi, o were ihe dịka otu awa iji dozie faịlụ siri ike tupu yatarNa-eme ihe ọ bụla
Jenụwarị 1st, 2017
Simpledị Mfe Dị Mfe
Ngwọta maka Followinggbaso Njehie Ndị Na-emekarị na Nsogbu na faịlụ Excel
Faịlụ a adịghị na usoro a na-achọpụta.
Excel chọtara ọdịnaya anaghị agụta na “filename.xslx”.
filename.xls 'Enweghị ike ịnweta.
Main Akụkụ na DataNumen Excel Repair v3.6
Nkwado maka Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 na Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019.
Nkwado iji dozie faịlụ Excel xls, xlw na xlsx na Excel mbipute 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 na Excel maka ụdị Office 365.
Nkwado faịlụ site Excel maka Windows na Mac.
Nkwado iji weghachite data cell na faịlụ Excel.
Nkwado iji weghachite usoro, gụnyere usoro ịkekọrịta na usoro abanyela.
Nkwado iji weghachite ụdị ọkọlọtọ na usoro ọdịnala maka sel na usoro.
Nkwado iji rụkwaa faịlụ Excel na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado rụkwaa ọtụtụ ogbe Excel.
Enwere ike iji ya dị ka ngwa nyocha ọhụụ nke kọmputa na nchọpụta elektrọnik (ma ọ bụ e-chọpụtara, eDiscovery).
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụzi xls na xlsx faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
Nkwado ịdọrọ & dobe ọrụ.
Nkwado iji mee mgbake Excel site na ntinye akara iwu.
iji DataNumen Excel Repair iji weghachite faịlụ Excel rụrụ arụ
Hụ nkuzi vidiyo Nke zuru ezu)
Hụ nkuzi vidiyo (Ngosi Version)
Mgbe Microsoft .xls gị, .xlw na .xlsx faịlụ rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi n'ihi ọtụtụ ihe na ị gaghị emeghe ha nke ọma na Excel, ịnwere ike iji DataNumen Excel Repair iji dozie nsogbu ahụ. Ọ ga-i scanomi ihe rụrụ arụ faịlụ na n'ịwa ọhụrụ njehie-free faịlụ maka gị.
Start DataNumen Excel Repair.
Mara: Tupu ị nwetaghachi faịlụ ọ bụla rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi Excel DataNumen Excel Repair, biko mechie ngwa ọ bụla ndị ọzọ nwere ike gbanwee faịlụ a. Ma biko biko mechie Microsoft Excel.
Họrọ faịlụ Excel mebiri emebi ma ọ bụ mebiri emebi ka arụzie:
Can nwere ike itinye aha faịlụ Excel ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ.
Site na ndabara, DataNumen Excel Repair ga-echekwa faịlụ Excel edozi na faịlụ ọhụrụ aha ya bụ xxxx_fixed.xls maka faịlụ .xls na xxxx_fixed.xlsx maka faịlụ .xlsx, ebe xxxx bụ aha isi faịlụ Excel. Dịka ọmụmaatụ, maka isi faịlụ Excel Damaged.xls, aha ndabara maka faịlụ a edozi ga-abụ Damaged_fixed.xls. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye na ofu faịlụ aha ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ ofu faịlụ.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Excel Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi faịlụ Excel.
ga-egosi mmezi mmezi.
Mgbe usoro mmezi ahụ, ọ bụrụ na enwere ike idozi faịlụ Excel isi ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu Excel faịlụ na Microsoft Excel.
DataNumen Excel Repair 3.6 weputara na March 4th, 2021
Kwado asụsụ dị iche iche na GUI.
Kwado Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Japanese, Korean na Simplified Chinese.
Idozi obere chinchi.
DataNumen Excel Repair 3.1 weputara na Disemba 11th, 2020
Na-elele mmelite ngwaahịa.
Nchekwa onwe nkwalite ka ọhụrụ version.
DataNumen Excel Repair A tọhapụrụ 2.9 na November 2nd, 2020
Mee ka mgbake dịkwuo mma.
DataNumen Excel Repair 2.8 weputara na October 16th, 2019
DataNumen Excel Repair A na-ahapụ 2.7 na Septemba 16, 2019
Mee ka mgbake ahụ dịkwuo mma.
DataNumen Excel Repair A tọhapụrụ 2.6 na June 8, 2019
Jiri teknụzụ AI iji nyochaa faịlụ ahụ.
Redesign ogbe idozi engine.
Nkwado iji chekwaa ogbe ndozi log.
DataNumen Excel Repair A na-ahapụ 2.4 na Jenụwarị 21th, 2019
Kwado Excel 2019.
Mezie ụfọdụ ahụhụ.
DataNumen Excel Repair A na-ahapụ 2.3 na August 20th, 2018
Kwado Excel 2016 na Excel maka Office 365.
Mee ka mgbake nke usoro dịkwuo mma.
DataNumen Excel Repair 2.2 weputara na Disemba 24th, 2015
DataNumen Excel Repair A tọhapụrụ 2.1 na Septemba 7, 2013
Nkwado iji nwetaghachi otu usoro na usoro abanyela.
Nkwado iji weghachite usoro nke sel.
DataNumen Excel Repair A tọhapụrụ 2.0 na June 22, 2013
Kwado ụdị Excel 2007, 2010 na 2013.
Gbanwee njirimara onye ọrụ nke ngwa ahụ.
DataNumen Excel Repair A tọhapụrụ 1.4 na May 23th, 2005
Mee ka njirimara onye ọrụ dị mma.
DataNumen Excel Repair A na-ahapụ 1.2 na February 10th, 2004
Nkwado iji weghachite usoro.
Nkwado iji weghachite aha akwụkwọ ọrụ.
DataNumen Excel Repair A na-ahapụ 1.1 na November 5th, 2003
Mee ka ọsọ ọsọ na izi ezi nke mgbake data dị mma.
Mee ka ozi log dị nkenke.
DataNumen Excel Repair A na-ahapụ 1.0 na August 5th, 2003
Nkwado idozi xls na xlw faịlụ na Excel ụdị 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụzi faịlụ xls na menu nke Windows Explorer dị mfe.
Nkwado iwu akara (DOS ozugbo) oke.
Rụzie na-agbake rụrụ arụ Microsoft Outlook data faịlụ (.pst).
Dozie ma weghachite akwụkwọ Microsoft Microsoft rụrụ arụ (.doc na .docx files).
Dozie ma weghachite ọdụ data Microsoft Access rụrụ arụ (.mdb na .accdb faịlụ).
Soro ma ọ bụ dị ka anyị na Facebook, LinkedIn na Twitter iji nweta nkwalite niile, akụkọ kachasị ọhụrụ na mmelite na ngwaahịa na ụlọ ọrụ anyị.
DataNumen Archive Repair A tọhapụrụ 3.8 na Mee 16, 2021
DataNumen TAR Repair A tọhapụrụ 3.0 na Mee 11, 2021
DataNumen PSD Repair A tọhapụrụ 2.9 na Mee 4, 2021
Usoro Nkwado na Nlekọta
Copyright © 2021 DataNumen, Inc. - Ikike niile echekwabara.